मास्क लाउने र हात धुने बानीले घटे सरुवा रोग | Nagarik News - Nepal Republic Media
कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर गत वर्षदेखि विश्वभरि अपनाइएको जनस्वास्थ्य मापदण्डका कारण अन्य सरुवा रोगसमेत घटिरहेको पाइएको छ। राजधानीका मुख्य तथा ठूला अस्पतालहरूले फोहोर तथा प्रदूषणले लाग्ने रोग नियन्त्रण भइरहेको अनुभव गरेका छन्। चिकित्सकका अनुसार न गर्मी महिनाका झाडापखाला फैलियो न त रुघाखोकी तथा निमोनिया।
यो वर्षको जाडोमा रुघाखोकी तथा श्वासप्रश्वासका बिरामी घटेको वीर अस्पताल मेडिकल विभागका अनुभव छ। विभागका वरिष्ठ फिजिसियन डा. धु्रव गैरेका अनुसार गत वर्ष दैनिक औसत ६० जना इन्फ्लुएन्जाका मात्र बिरामी आउँथे। यो वर्ष अत्यन्त कम संख्यामा मात्र यस्ता बिरामी उपचारका लागि आइरहेका छन्। यो वर्ष गत वर्षजस्तो भाइरल डायरिया र फुड प्वाइजनका बिरामी पनि नआएको डा. गैरे बताउँछन्। हिँडडुल गर्नेहरूमा देखिने इन्फ्लुएन्जा तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू पनि यो वर्ष अत्यन्त कम देखिएको उनको अनुभव छ। ‘मास्क लगाउनाले युवाहरूमा देखिने श्वासप्रश्वासको संक्रमण यो वर्ष धेरै घटेको छ,’ डा. गैरे भन्छन्।
चिकित्सककका अनुसार यो वर्षको गर्मीमा देखापर्ने हेपाटाइटिस, झाडापखाला तथा टाइफाइडका बिरामी विगतका वर्षहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेका छन्। कोभिड र अन्य इन्फ्लुएन्जाको सर्ने प्रक्रिया एउटै भएकाले मास्क लगाउने र दूरी कायम राख्दा सर्नमा नियन्त्रण भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोभिडबाट बच्न मानिसहरू घरबाहिर कम खाने, जहाँ पायो त्यहाँ नखाने, हातको सफाइ गर्ने बानीले कीटजन्य सरुवा रोगमा कमी आएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
इन्फ्लुएन्जाजस्तै डेंगीको संक्रमणसमेत घटेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान विभाग संयोजक डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन्। पुनका अनुसार कोभिड–१९ र अन्य इन्फ्लुएन्जा सर्ने तरिका एउटै भएको अवस्थामा कोभिड–१९ देखा पर्नु र इन्फ्लुएन्जा संक्रमण कम देखिनु अध्ययनको विषय हो। उपुनको अनुमानमा भाइरसहरू एउटै ठाउँमा एकैपटक देखिँदा आपसमा हुने भाइरल इन्टरफेरेन्स (आपसी प्रतिस्पर्धा) हुने क्रममा एक भाइरस मात्र सक्रिय हुने प्रक्रिया हुन सक्छ। जस्तो कि कोरोना भाइरससँगको प्रतिस्पर्धामा अन्य निष्क्रिय भएको हुन सक्छ। पुुनका अनुसार अमेरिका तथा युरोपमा समेत अन्य कोभिडको संक्रमण जाडोमा पाँच गुणाले बढ्ने भन्ने अनुमान गरिएकोमा विश्वभरि नै घट्नुमा मास्कको प्रयोग तथा हातको सफाइ नै कारण हुन सक्छन्।
कोभिड भाइरससँग जोगिने उपायहरूले अन्य रोगको संक्रमणबाट बचाएको हुनाले राज्यको सरुवा रोगमा हुने खर्चको भार कम भएको डा. पुन बताउँछन्। मास्क लाउने, हात धुने र दूरी कायम गर्ने गरेकै कारण अन्य सरुवा रोगमा कमी आएकाले अब सबै नेपालीले यस्तै जीवनशैली अपनाउनेपर्ने आवश्यकता स्वस्थ जीवनका लागि सहयोगी हुने वीर अस्पतालका डा. गैरे औंल्याउँछन्। ‘कोभिडबाट बच्न लगाइएका मास्कले प्रदूषणबाट उत्पन्न हुने श्वास–प्रश्वासका रोगह पनि कम भएको देखियो,’ उनले भने। गत अक्टोबरमा अमेरिकाबाट प्रकाशित ‘जर्नल अफ मेडिकल इन्टरनेट रिसर्च’ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा ताइवानमा गरिएको अध्ययनले मास्क लगाउने, हात धुने र दूरी कायम राख्ने चलनले कोरोनाबाट मात्र बच्ने नभई अन्य श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट बच्न सहयोग पुगेको पाइएको निष्कर्ष निस्केको थियो।
प्रकाशित: २१ पुस २०७७ ०६:२३ मंगलबार
हात धुने बानी सरुवा रोग